လုပ်ငန်းဖော် တွေရဲ့ စတန့် စွမ်းရည်ကို ပြခဲ့တဲ့ ဒွန်နီယန် - SANTHITSA
လုပ်ငန်းဖော် တွေရဲ့ စတန့် စွမ်းရည်ကို ပြခဲ့တဲ့ ဒွန်နီယန်
ဟောင်ကောင် မင်းသား ဒွန်နီယန်က တကယ် တော်တဲ့ သိုင်းသမား တစ်ယောက် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိပါတယ် ။ ဒစ္စနေး ကရိုက်တဲ့ မူလန်း ရုပ်ရှင် ထဲမှာလည်း သူ့ရဲ့ သိုင်းစွမ်းရည်ကို ပြခဲ့လို့ အမေရိကန် ဒါရိုက်တာတွေ အံ့အားသင့် ရလွန်းလို့ သူတို့က မေးစေ့တွေတောင် မြေကြီးပေါ်ကျခဲ့ ရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ် ။
အခု ကော်ရိုနာ ဗိုင်းရက်ကာလ အတွင်းမှာ အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ သူတွေ အတွက် အပျင်းပြေ ဟာသ စတန့်ပြကွက် ဗီဒီယိုဖိုင်လေး တစ်ခု တင်ခဲ့ပါတယ် ။ ရုပ်ရှင် တည်းဖြတ်မှု ကောင်းလွန်းလို့ ပရိသတ်တွေ ရှယ်လိုက် ကြတာ လိုင်းပေါ်မှာ အုံးအုံး ထသွားပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို ထိုးလိုက်တာ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လဲကျသွားပြီး လဲနေတဲ့ သူက ပြန်ထပြီး ထိုးတော့ နောက်တစ်ယာက် ထပ်ပြီး လဲကျသွားတဲ့ စတန့်ခန်း တွေကို ပြသွားတာပါ ။
ဒွန်နီယန်က သူ့ရဲ့ စတန့်အဖွဲ့သားတွေကို စုပြီး အဲ့ဒိ ဗီဒီယိုကလေးကို ရိုက်ပြ လိုက်တာပါ ။ သူတို့ အက်ရှင်ကား တွေကို ဘယ်လို အောင်မြင်အောင် ရိုက်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကို အဲ့ဒိလို ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ ပြသ ခဲ့တာပါ ။ ဒွန်နီယန် က သူနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဝင်ချွန်းကစားတဲ့ သစ်သားတိုင်မှာ လေ့ကျင့် နေရင်းက ကင်မရာကို ဘေးစောင်းကန် ချက် နဲ့ စကန် လိုက်တဲ့ပုံ နဲ့ စလိုက် တာပါ ။ “ကျနော် အက်ရှင် ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ အလုပ်လုပ် လာတာ နှစ် ၃၀ ရှိနေပါပြီ ။
ကျနော်က ရုပ်ရှင်တွေ တစ်ကားပြီး တစ်ကားရိုက်လာတာ ကျနော့် စတန့်အဖွဲ့ရဲ့ သစ္စာရှိမှု အလုပ် ကြိုးစားမှု ကို လေးစားလွန်းလို့ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို ရိုက်ပြ တာပါ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းနောက် ကွယ်က စတန့်သမားတွေ ရာနဲ့ ချီပြီး ရှိပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှု သူရဲကောင်းဆန်မှုတွေ အတွက် ဂုဏ်ပြု ပေးတာပါ”လို့ ဆိုတယ် ။
အဲ့ဒိ စတန့်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ ဟောင်ကောင် စင်ကာပူ တရုတ် ကနေဒါ ဂျပန် က စတန့်သမားတွေပါပါတယ် ။ တစ်ယောက် တိုက်ခိုက်နေတာ နောက်ဆုံး တိုက်ကွက်ကိုတော့ ဒွန်နီယန်က ဒယ်အိုးနဲ့ ကာကွယ်လို့ နိုင်ပါ တယ် ။ သူက လက်ရှိမှာ အမျိုးသား စတန့်သမားတွေရဲ့ အစွမ်းကို ပြပြီးနောက် အမျိုးသမီး စတန့်သမားတွေရဲ့ အစွမ်းကို ပြတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လည်း ရိုက်ပြဦးမယ်လို့ သူကဆိုပါတယ် ။
I’ve been an action director for over 30 years and blessed to have my dedicated, loyal and hard working stunt team with me for so many yrs. Our team (long and short term, worldwide) has probably reached over 100 action brothers. (Unfortunately couldn’t have everyone in our video) So proud to see many of them becoming world renowned action directors and top stunt action heroes behind the scenes. These guys don’t get enough credit. #donnieyenstunteam #bulletproof #forevergrateful #unsungheroes #甄家班
Posted by Donnie Yen 甄子丹 on Wednesday, May 20, 2020
REF: Asian one / Photo; facebook
လုပျငနျးဖျော တှရေဲ့ စတနျ့ စှမျးရညျကို ပွခဲ့တဲ့ ဒှနျနီယနျ
ဟောငျကောငျ မငျးသား ဒှနျနီယနျက တကယျ တျောတဲ့ သိုငျးသမား တဈယောကျ ဆိုတာကို ကနြျောတို့ သိပါတယျ ။ ဒစ်စနေး ကရိုကျတဲ့ မူလနျး ရုပျရှငျ ထဲမှာလညျး သူ့ရဲ့ သိုငျးစှမျးရညျကို ပွခဲ့လို့ အမရေိကနျ ဒါရိုကျတာတှေ အံ့အားသငျ့ ရလှနျးလို့ သူတို့က မေးစတှေ့တေောငျ မွကွေီးပျေါကခြဲ့ ရတယျလို့ ပွောကွပါတယျ ။
အခု ကျောရိုနာ ဗိုငျးရကျကာလ အတှငျးမှာ အိမျတှငျးအောငျးနရေတဲ့ သူတှေ အတှကျ အပငျြးပွေ ဟာသ စတနျ့ပွကှကျ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး တဈခု တငျခဲ့ပါတယျ ။ ရုပျရှငျ တညျးဖွတျမှု ကောငျးလှနျးလို့ ပရိသတျတှေ ရှယျလိုကျ ကွတာ လိုငျးပျေါမှာ အုံးအုံး ထသှားပါတယျ ။ လူတဈယောကျက လူတဈယောကျကို ထိုးလိုကျတာ ပုံစံ အမြိုးမြိုးနဲ့ လဲကသြှားပွီး လဲနတေဲ့ သူက ပွနျထပွီး ထိုးတော့ နောကျတဈယာကျ ထပျပွီး လဲကသြှားတဲ့ စတနျ့ခနျး တှကေို ပွသှားတာပါ ။
ဒှနျနီယနျက သူ့ရဲ့ စတနျ့အဖှဲ့သားတှကေို စုပွီး အဲ့ဒိ ဗီဒီယိုကလေးကို ရိုကျပွ လိုကျတာပါ ။ သူတို့ အကျရှငျကား တှကေို ဘယျလို အောငျမွငျအောငျ ရိုကျခဲ့ကွတယျ ဆိုတာကို အဲ့ဒိလို ဗီဒီယိုဖိုငျလေးနဲ့ ပွသ ခဲ့တာပါ ။ ဒှနျနီယနျ က သူနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ဝငျခြှနျးကစားတဲ့ သဈသားတိုငျမှာ လကေ့ငျြ့ နရေငျးက ကငျမရာကို ဘေးစောငျးကနျ ခကျြ နဲ့ စကနျ လိုကျတဲ့ပုံ နဲ့ စလိုကျ တာပါ ။ “ကနြျော အကျရှငျ ဒါရိုကျတာ တဈယောကျအဖွဈနဲ့ အလုပျလုပျ လာတာ နှဈ ၃၀ ရှိနပေါပွီ ။
ကနြျောက ရုပျရှငျတှေ တဈကားပွီး တဈကားရိုကျလာတာ ကနြေျာ့ စတနျ့အဖှဲ့ရဲ့ သစ်စာရှိမှု အလုပျ ကွိုးစားမှု ကို လေးစားလှနျးလို့ ဒီဗီဒီယိုဖိုငျကို ရိုကျပွ တာပါ ။ ကနြျောတို့ရဲ့ ရိုကျကှငျးနောကျ ကှယျက စတနျ့သမားတှေ ရာနဲ့ ခြီပွီး ရှိပါတယျ ။ သူတို့ရဲ့ စှနျ့လှတျ အနဈနာခံမှု သူရဲကောငျးဆနျမှုတှေ အတှကျ ဂုဏျပွု ပေးတာပါ”လို့ ဆိုတယျ ။
အဲ့ဒိ စတနျ့ဗီဒီယိုဖိုငျမှာ ဟောငျကောငျ စငျကာပူ တရုတျ ကနဒေါ ဂပြနျ က စတနျ့သမားတှပေါပါတယျ ။ တဈယောကျ တိုကျခိုကျနတော နောကျဆုံး တိုကျကှကျကိုတော့ ဒှနျနီယနျက ဒယျအိုးနဲ့ ကာကှယျလို့ နိုငျပါ တယျ ။ သူက လကျရှိမှာ အမြိုးသား စတနျ့သမားတှရေဲ့ အစှမျးကို ပွပွီးနောကျ အမြိုးသမီး စတနျ့သမားတှရေဲ့ အစှမျးကို ပွတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလညျး ရိုကျပွဦးမယျလို့ သူကဆိုပါတယျ ။
This Month : 21412
Total Visit : 53818
Total Hits : 900538